Bedelka SMS, Music, Video, Photos iyo Xiriirada ka macruufka in Samsung
Bedelka SMS, Music, Video, Photos, Calendar iyo Xiriirada ka macruufka in Samsung
Mase ka qalab macruufka ah in Samsung, laakiin kaliya in la helo in aan is tusay sida ay u gudbiyaan xogta u dhaxeeya? Haddii taasi waxa weeye waxa aad tahay yaabiyaa, waxaad u timid inaad meel sax ah. Maqaalka waxa uu kuu sheego sida ay u gudbiyaan xiriirada, video, sawir, music iyo SMS ka macruufka in Samsung fudayd.
Xalka 1. music Transfer, video, sawiro, jadwalka taariikhda, xiriirada iyo SMS ka macruufka in Samsung la MobileTrans
Xalka 2. Nuqul macruufka qalab si Samsung la Samsung Smart Switch
Demi macruufka in Samsung, No kaaftoomi
Bedelka content dhexeeya iDevice iyo Android telefoonada 1 click
Xiriirada Transfer on iDevice, Gmail, iCloud, Hotmail, Yahoo !, iyo ka badan si uu Samsung 1 click.
Jadwalka ku xasuusta phone macruufka iyo iCloud dhaqaaq Samsung fudayd.
Copy SMS iyo qoraalka ee iMessages ku macruufka qalab si Samsung.
Dhaqaaq photos iyo badalo audio iyo video in Samsung u previewing oo la wadaago.
Aad ee kaabta macruufka qalab si PC, si aad u soo celin kartaa si aad Samsung dambe.
Great u iPhone, iPad, iPod taabto oo badan oo qalab Samsung. Baro More >>
Tag version Mac - Wondershare MobileTrans u Mac .
1-Guji Transfer, Sidaas Fast
Way fududahay in la isticmaalo iyo arrin degdeg ah. Just in mid ka mid click, dhammaan xogta ku saabsan qalabka macruufka lagu wareejin doonaa Samsung.
Xiriirada kala iibsiga, SMS, iwm
Waxa uu helo xogta oo dhan, kuwaas oo xiriir, jadwalka, music, video, sawiro iyo SMS, off macruufka qalab si Samsung oo aan ka kaaftoomi kasta.
Wax kasta oo xambaarsan telefoonka yihiin, waxa fiican in aad si guul leh ku wareejin files ka macruufka in Samsung oo aan wax su'aalo ah.
Your Samsung waa amar? Ha welwelin. Waxaad marka hore ka dibna qalab aad macruufka gurmad soo celin kartaa Samsung dambe. (Version Windows oo keliya ayaa sameeya)
Bedelka Device macruufka in Samsung
IDevice kaabta, Soo Celinta Samsung
Si toos ah u gudbiyaan xiriirada, jadwalka, video, music, SMS iyo sawiro ka macruufka in Samsung, waa inaad haysataa qalab macruufka Samsung ah in aad gacanta waqti isku mid ah.
Tallaabada 1. Ku rakib Wondershare MobileTrans ku Computer
Marka hore, soo baxdo iyo rakibi qalabka kombiyuutarka. Waxa maamula si ay u muujiyaan in ay suuqa kala hoose. Dooro Phone in hab Phone.
Fiiro gaar ah: Fadlan soo dajiyo Lugood kombiyuutarka. Kaliya sidan ku Wondershare MobileTrans shaqeyn karaan si sax ah.
Tallaabada 2. Isku Your Device macruufka iyo Samsung in Computer
Connect aad labada qalabka kombiyuutarka socda Windows OS ama Mac OS X via fiilooyinka USB. Marka si guul leh la ogaado, labada qalabka la soo bandhigi doonaa in uu furmo.
Sax xogta oo cad ka hor inta nuqul marka aad rabto in aad ka saarto xogta jira aad Samsung oo bilaash ah ilaa meel xogta ka qalab macruufka ah
Tallaabada 3. Transfer Xiriirada, SMS, Music, Calendar, Photos iyo Video laga soo macruufka in Samsung
Sawirka content ku cad dhexe iyo in la hubiyo waxa aad rabto. Guji Start Copy . Inta lagu jiro hanaanka wareejinta, wuu xusuusan waayay inuu barkinta qalab midkood. Markii geeddi-socodka ah uu dhamaado, riix OK .
Haddii aad leedahay qalab macruufka ah ee gacanta oo weli sugaya cusub Samsung, sidan kugu habboon.
Tallaabada 1. Run Tool ka dib markii Rakibaadda
Ku rakib qalabka kombiyuutarka iyo waxa maamula. Haddii aad qabto ma Lugood lagu rakibay kombuyuutar, fadlan ku soo dajiyo. Tag My hab kaabta Phone.
Tallaabada 2. kaabta Your Device macruufka in Computer
Connect qalab macruufka, ku odhan, iPhone, iPad iyo iPod taabto, in computer. Your qalab macruufka ah la soo bandhigi doonaa bidixda la content ay taageerayaan saxday. Tag bilow Copy in gurmad aad content doonayay in computer.
Tallaabada 3. Soo Celinta File ee kaabta in aad qalab Samsung
Barkinta qalab macruufka iyo is qalab Samsung ku xiran. Marka si guul ah loo aqoonsan yahay, qalab Samsung ka muuqan doontaa xaq. Back to page guriga, Tag oo u dooran Soo Celinta ka hayaan hab. In dib u soo celinta uu furmo suuqa, u tag guddi ka tegey oo dooro file ah oo gurmad ah (waxay noqon kartaa iPhone, iPad ama iPod taaban gurmad file.) Hubi content doonayo dhexe. Guji Start Copy in la soo celiyo faylka gurmad si aad qalab Samsung.
Demi Xogta laga Samsung si iPhone
Ka iPhone Bedelka Content in Samsung
Haajiraan Faylal ay ka Nokia in Samsung
Ka iPad Bedelka Content in Samsung
Nuqul Xogta laga Android inay macruufka
Faylal ay ka dhaqaaq Android inay Samsung
Xogta laga BlackBerry Bedelka in Samsung
Best lagu bedelan karo Samsung Kies
Isticmaal Samsung Kies in aad nuqulka Files
Ma rabtaa in ay u guuraan xogta laga qalab macruufka ah in a Samsung Galaxy phone cusub, sida S5, lacag la'aan? Samsung Smart Switch yimaado aad u. Waxaa ka qalab macruufka ah wareejin karaan xiriirada, fariimaha, sawiro, Deymaha maqan, jadwalka iyo in ka badan.
Faa'iido: Lacag la'aan Qasaarooyinka: 1. Taageeraan oo kaliya qaar ka mid ah qalabka Samsung, sida Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S4 mini, Note Samsung Galaxy oo dheeraad ah. 2. In gurmad Qaado waqti aad macruufka qalab si Lugood hore.
Tallaabada 1. Isticmaal Lugood in gurmad aad macruufka qalabka kombiyuutarka. Haddii aad qabto files gurmad, u gudub talaabada.
Tallaabada 2. Run Samsung Smart Switch kombiyuutarka iyo xirmaan telefoonka Samsung in kombiyuutarka la cable USB ah.
Tallaabada 3. In uu furmo, dooro file ah oo gurmad ah ka qalab macruufka ah. Riix Next . Hubi content ee file gurmad ah. Markaas, riix Start Suuqa si ay u bilaabaan.
Baro wax badan oo ku saabsan Samsung Smart Switch >>
> Resource > macruufka > Si fudud Bedelka SMS, Music, Video, Photos, Calendar iyo Xiriirada ka macruufka in Sam